Huwandu hweVanhu Vabatwa neCovid-19 Munyika Hunokwira Kusvika paMakumi Matatu neVanomwe
Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwave pavanhu makumi matatu nevanomwe.
Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakwira kusvika pavanhu makumi matatu nevanomwe zvichitevera kuwanikwa kwemumwe munhu mumwe chete aine chirwere ichi pavanhu vakaongororwa neMuvhuro muHarare.
Mashoko akaburitswa neMuvhuro nebazi rezvehutano nekurerwa zvakanaka kwevana anoti vanhu vaponawo kubva kuchirwere ichi vave gumi nevaviri, uye vashaya vachiri vanhu vana.
Bazi iri rinoti vanhu vaongororwa hutachiwana hwe coronavirus, uhwo hunokonzera Covid-19, pachishandiswa zvikwanisiro zvinoburitsa ongororo pakarepo, kana kuti rapid test kits, vasvika pazviuru gumi nezviviri nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nevasere, kana kuti 12 498.
Vaongororwa pachishandiswa michina yePCR vanonziwo vave zviuru gumi nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevasere, kana kuti 10 598, kusvika pari zvino.
Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vanonzi neJohns Hopkins University yekuAmerica vadarika pamamiriyoni mana nemazana maviri ezviuru kana kuti 4.2 million, kuchitiwo vafa vachinzi vadarika mazana maviri nemakumi masere nenhanhatu ezviuru nemazana masere.
Vamwe vevanhu vari kuwanikwa vaine hutachiwana muZimbabwe vanonzi havana nhoroondo yekusangana nevanhu vanobva kune dzimwe nzvimbo, izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi mune zvehutano zvinhu zvinovhundutsa chose.
Mumwe chiremba ari muHarare, Doctor Gilson Mandigo, vachitaura vakazvimirira, vanoti kuve nevanhu vashoma vari kuwanikwa vaine chirwere icheCovid-19 munyika kunogona kunge kuri kuburikidza nekuda kwematanho akakasika kutorwa nehurumende anosanganisira kurambidza vanhu kufambafamba, kana kuti lockdown, pamwe nekugarisa kwavo voga vanhu vari kubva kunze kwenyika kana kuti quarantine.
Asi Doctor Mandigo vanoti vanhu vaongororwa kana vaine hutachiwana hwe coronavirus kusvika pari zvino vachiri vashoma zvakanyanya, vachiti vanokurudzira hurumende kuti isimbise kuongororwa kwevanhu vakawanda.
Doctor Mandigo vanokurudzirawo veruzhinji kuti vakoshese matanho ekudzivirira kutapuriranwa kwehutachiwana anosanganisira kuchengetedza nhanho dzekuti vanhu vasiye pavanenge vakaungana, kugeza maoko nesipo zvakasimba uye kusabatana maoko kana vachikwazisana.
"Nhau yekuzvidzivira chirwere yakakosha. Nekudaro ndinokurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti rwurambe rwuchiita zvatinokurudzirwa nebazi rezvehutano kuti tiite.
"Pane nhau ye social distancing, yekusiya nhanho inokwana kuita iyo one metre pakusangana kwatinenge tichiita, kwoita nyaya yekugeza maoko nesipo. Iyo yakakosha zvakare nekuti mukumhoresana imomo ndimo mumwe matinowana chirwere," vanodaro Doctor Mandigo.